Why! | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » Unlabelled » Why!
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 8:46 AM
Posted by မိုးသက် at 8:46 AM Read more
₭Ǿ2 February 23, 2012 at 11:18 AM
ဟိုက်ရှား.. ခံစားချက်တွေပြင်းလားချည် လား သူငယ်ချင်းရ
ချစ်စံအိမ် February 23, 2012 at 3:56 PM
မြတ်ကြည် February 23, 2012 at 5:01 PM
မောင်လေးရေ၊ ပေါက်စက ဘာဖြစ်တာလဲ? မိဘတွေက တချိန်ချိန်ကျရင် သဘောတူလာအောင် ကြိုးစားပေးလို့ရပါတယ်။
မောင်လေးလဲ မတော်တဲ့သူမှမဟုတ်ပဲ။ တော်လို့ပဲ ရုရှားရောက်လာတာလေ။ မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီး အပေါ်တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့သူဆိုရင် သဘောတူလာကြမှာပါ။
အခုအချိန်ထပ်ဆက်ကြည့်ပါဦး။ မှီသေးတယ်။ ဇွဲမလျှော့လိုက်နဲ့နော်။ ဇွဲလျှော့လိုက်ရင် တကယ်မချစ်ဘူးထင်လိမ့်မယ်။ တနေ့နေ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြီးမြောက်ရင် သူ့မိဘတွေ လက်ခံလာပါလိမ့်မယ်။ ငယ်သေးတာလည်း ပါမှာပေါ့၊ မောင်လေးရယ်။
စိတ်မညစ်နဲ့နော်။ စာပဲ ကြိုးစား။ အစ်မပြောဆို ပြောပေးမယ်လေ။
အယ်နီ February 23, 2012 at 8:33 PM
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ...အယ်နီ ဒီ ကိုလာဖတ်တေနကြ ကွန့်မန့်တော့တခါမှမပေးဖူးပါဘူး ဒါ ပထမဆုံးပဲ မောင်လေးကအဲပဒီညီမလေးကိုတော်တော်ချစ်တာပဲလို့အမြဲတွေးမိနေတာ ......ဒီလောက်ချစ်တတ်တဲ့ သူတွေဘာလို့ဝေးရမှာလဲ ...အားတင်းထားပါ...အခုလိုအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး ရည်မှန်းချက်တွေလွဲချော်အောင်တော့ဘယ်တော့မှမနေပါနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့နော် ......ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ့်မိသားစုနောက်မှာအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိရနော် .....ကိုယ်ပျော်၇ွင်ရင်သူတို့ဝမ်းသာတယ် ...ကိုယ်သောကရောက်ရင်သူတို့ ရင်နာကြရတယ် အဲ့ဒီတော့ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ ကျတဲ့ မောင်လေးမိသားစုအတွက် အမြဲတွေးပါနော်...စိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်နဲ့နော် fighting!! အဆင်အမြန်ဆုံးပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဟိုညီမလေးလဲမောင်လေးရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရားကိုနားလည်ခံစားနိုင်ပါစေ
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး မောင်လေး.. အားတင်းထားပါ.. စိတ်မညစ်နဲ့လို့မပြောချင်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့.. စိတ်ဓါတ်ကျသွားရင် ကျန်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ဘယ်လိုဆက်တိုက်မလဲ.. ဒီတော့ ဇွဲမလျှော့နဲ့... စိတ်အေးအေးထားပြီး ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာတွေးပါ.. မောင်လေးကိုချစ်ခင်တဲ့ အကိုတွေအမတွေရှိတယ်.. တစ်ခုခုဆို အားလုံးဝိုင်းကူ အကြံပေးကြမှာပါ..
မောင်မောင် February 23, 2012 at 11:19 PM
ညီလေးရေ အချစ်ဆိုတာကို ညီလေးဘ၀ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ. မရောလိုက်ပါနဲ.။ အချစ်ကြောင်. ခံစားပြီး ဘာမှ ရေရေရာရာ မလုပ်တော.တဲ.ယောက်ကျားလေးတွေကို အစ်ကို မကြိုက်ဆုံးဘဲ။
Candy February 23, 2012 at 11:26 PM
အင်... ငါ့မောင် တကယ်ဖြစ်နေတာလား?
တခုတော့ ပြောပြချင်တယ်..လူတိုင်းလိုလိုဟာ ငယ်ရွယ်စဉ် ကြုံတွေ့တဲ့အချစ်တွေကို အရမ်းမျှော်လင့်ထားတတ်တယ်။ အဲ့ဒါ ပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသလိုပဲ.. ဒါပေမယ့် တို့တွေ သတိမေ့နေတာက နောင်တချိန်မှာ သူ့ထက်ပိုပြီးပြည့်စုံမယ့် အချစ်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာလေ...
မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်သက်သက်ပါ။ အချစ်စစ်မှန်ရင် အားလုံးငြိယူလို့ရတယ်။
ငါ့မောင် နောင်တချိန်အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင် ခုချိန်ခံစားနေရတာတွေကို ဟာသတခုလို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ရီမိလိမ့်မယ်.. အမပြောတာယုံ :D
ပစ်ပစ် February 24, 2012 at 9:05 AM
Anonymous February 25, 2012 at 7:28 AM
အသည်းကွဲ ကဗျာတွေမဖတ်ချင်ဖူးဆို မှ..လာဖတ်မိတယ်...ကဗျာလေးကောင်းတယ်